बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा” – ABC NEWS 24
उनलाई देखेर मन कापि रहेको थियो । नचिनेको केटा पराईको घर कसरी बानिपर्ला भनेर झन भकानिएर रोएकि होलिन् । म बिस्तारै उनको छेउ सरे, उनको हात समाए र भने नरौन यार मलाई पनि रुन आईस्कयो यसरी रुनु हुदैँन मैले बेच्नै लानलाग्या त होईन नि !अगी आमा बाबुलाई सम्झाएको गरि आफ्नो मन बुझाउ न । के गर्छाे त संसारको लिलै यस्तो हो तिम्रो आमा पनि बाबा सगँ यसरी नै आउनुभएको त हो नि भन्दै उनीभन्दा पर सरे । गर्दा गर्दा घर आईपुग्यो आमा आएर आएर कार बाट उनको हात समाउन थाल्नु भयो म पनि उनको पछि पछि हिडे ।दिद र सानी बहिनी आएर एउटाले पानी र अर्काेले दियो लिएर हामीलाई घुम्न थाले । त्यसै गरि अर्काे पट्टि आयो छोरा बुहारी लिएर मैले छोरो पाएकी थिए र भन्दै रत्यौली घन्कीदै थियो । सबैको दुलई हेर्ने घुईचो थियो ।
← म:रेका काग बटुलेर, कुखुराको मासु भन्दै पकाएर बेचे ब्यापारीले !
छोराको रहरमा आठ छोरी: श्रीमती भन्छिन् अब पुग्यो, श्रीमान भन्छन् छोरा नै चाहिन्छ →